कोरोना मुक्त भएसँगै ट्रम्पले सुरु गरे चुनावी अभियान
विराटनगर, २७ असोज । ह्वाइट हाउस फिजिसियन डा. शन कन्लीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना मुक्त भएको जानकारी दिएका छन् ।
सोमबार साँझबाट कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएसँगै ट्रम्पले चुनावी अभियान सुरु गरेका छन् । संक्रमण भइरहँदा पनि विभिन्न कार्यक्रममा पुग्ने गरेका उनी पुनः चुनावी अभियानमा सामेल हुन थालेका हुन् । पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै संक्रमण पुष्टि भएको १२ दिनपछि उनले कोरोना जितेका हुन् ।
डा. कन्लीले जारी गरेको वक्तव्यमा ट्रम्पको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उल्लेख छ । अब ट्रम्पबाट अरुमा कोरोना नसर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
कोरोनाम मुक्त भएको घोषणासँगै उनले फ्लोरिडाको सनफोर्डमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन् । उनले आफू ‘इम्यून’ भएको र अब भाइरसले आफूलाई आक्रमण गर्न नसक्ने बताए । कोरोना भाइरसलाई आफूले पराजित गरेको र सबैले पराजित गर्ने दाबी ट्रम्पले गरेका छन् ।
अक्टोबर १ मा ट्रम्पमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि उनी तीन दिनसम्म अस्पताल बसेका थिए । ट्रम्पसँगै हाइट हाउसका शीर्ष अधिकारीहरु पनि संक्रमित भएका छन् ।
अभियान कोरोना ट्रम्प